Spotify ho an'ny iPhone sy iPad, azo alaina maimaim-poana | Vaovao IPhone
Ora vitsy lasa izay dia nanambara izahay fa ny Spotify dia nanao ampahibemaso ilay tsaho efa nandeha manodidina ny tambajotra nandritra ny andro vitsivitsy: ny serivisy fandefasana mozika maimaim-poana dia tsy natokana ho an'ny kinova birao (Windows sy Mac) fotsiny ary ny rindranasa ho an'ny iOS (sy Android) dia azo ampiasaina ihany koa raha tsy nifanarahana ny kinova Premium. Na dia niaraka tamin'ny "fa" aza ny vaovao, ary izany dia voafetra ny kinova iPhone, afaka nilalao "kisendrasendra" ireo hira fotsiny. Ny fanesorana ny fetra 10 ora isam-bolana koa dia niaraka tamin'ity vaovao tsara ity ho an'ireo mpitia mozika. Azo alaina izao ny maody maimaimpoana vaovao ho an'ny fitaovana finday, ary nosedraina izahay, mba hahafahanay mampiseho aminao ny fomba fiasan'izy io amin'ny iPad sy iPhone.
Raha mpampiasa Spotify amin'ny solo-sainanao ianao, tsy misy tsy ampoizina ho anao ny kinova iPad: ny fiasa mitovy amin'ny PC sy ny Mac OS X dia azo jerena ao amin'ny Spotify for iPad. Ny tranomboky mozika rehetra an'ny Spotify dia eo an-tanan-tànanao, tsy misy fetra. Mitadiava mpanakanto, rakikira, na onjam-peo ary mankafy ny mozika tianao. Mazava ho azy, amin'ny alàlan'ny streaming fotsiny no ahafahanao manao azy. tsy azo atao ny mihaino mozika amin'ny maody ivelan'ny Internet. Ho an'ity dia mbola mila kaonty Premium ianao. Ny playlists sy ny gara no tianao indrindra dia ampifanarahina amin'ny kinovan'ny birao sy ny fitaovana hafa, ka ny asa rehetra ataonao amin'ny fitaovana iray dia hankafizinao amin'ny zavatra hafa mifandraika amin'ny kaontinao.
Ary ny kinova ho an'ny iPhone? Ary ny fetrany? Raha tsy azoko fa ny Spotify ho an'ny finday avo lenta dia misy fetrany raha nilaza taminay ny talen'io CEO io, mainka fa tsy azoko izany izao satria afaka nanandramana azy tamin'ny iPhone-ko aho. Tena ny fetra mahakasika ny iPad na ny solosaina dia izay tsy afaka mitendry ireo hira araka ny filahanao araka ny tokony ho izy ianao, fa sendra izany. Saingy azonao atao ny mifantina ny mpanakanto, ny rakikira, na ny lisitry ny tianao indrindra ary milalao ny atiny, eny, kisendrasendra. Azonao atao anefa ny mandefa ireo hira tsy misy fetra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, Spotify for iPhone dia mitovy amin'ny kinova hafa, fa "mikorontana." Vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa an-tapitrisany izay nampiasa Spotify tamin'ny maodiny maimaim-poana, ary vaovao ratsy ho an'ny serivisy mozika streaming hafa rehetra, izay mahita ny fomba namelan'ny Spotify azy ireo "ivelan'ny lalao."
Azonao atao ny misintona ny rindranasa Spotify ho an'ny iPad sy iPhone maimaimpoana tanteraka avy amin'ny App Store, ary mankafy ity serivisy vaovao maimaimpoana ity ho an'ny fitaovanao dieny izao.
Fanazavana fanampiny - iTunes Match VS Google Play Music (III): Radio
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Spotify ho an'ny iPhone sy iPad, azo alaina maimaimpoana
Tsy afaka misoratra anarana amin'ny olona iray voan'ny osmosis aho
Misy fetra hahafahana mitendry hira 6 isan'ora ary avy eo manome hira iray izay terenao hihaino eo anelanelany.
Azo antoka !!! Tsy mbola tonga tany amin'ireo hira 6 nesorina aho hijerena azy. Tsy mbola namaky na inona na inona momba izany aho tao amin'ny naoty Spotify na tao amin'ny tranonkalany.
Ricardo David dia hoy izy:
Ka tsy mifanaraka amin'ny kinovan'ny birao izany, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Ricardo David
spotify tsy miasa amin'ny ipad air
Ny fanavaozana ny Noely ho an'ny Temple Run 2 dia efa eto
Maty tao amin'ny orinasa iPhone 15c ny zaza iray 5 taona